Chọpụta ihe ị ga-ahụ na obodo Rothenburg na Germany | Akụkọ Njem
La obodo Rothenburg ob der Tauber bụ nke ógbè Ansbach, n'ime Federated State nke Bavaria na Germany. Obodo a pụtara ugbu a maka ịnwe etiti mgbe ochie echekwara nke ọma, nke mere ka ọ bụrụ ebe ndị njem nleta na Germany. Ruo narị afọ nke iri na itoolu, ọ bụ otu n’ime obodo ndị nweere onwe ha nke eze ukwu ya na-achị.
Ka anyị lee ihe bụ isi nke mmasị a mara mma German obodo. O nwere ike ọ gaghị abụ otu n'ime ndị ama ama amaara anya ma ọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ọla ochie nwere ọmarịcha amara na-esiri ya ike. Ya mere, anyị agaghị echefu ọbịbịa anyị gafere n'okporo ámá ochie ya.
1 Mara Rothenburg
2 Mgbidi obodo
5 Museumlọ ihe nkiri na-ata ahụhụ
6 Chọọchị San Jacobo
Rothenburg ob der Tauber pụtara Red Fort na Tauber na ọ bụ obere obodo, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ahọrọ iche banyere ya dị ka nnukwu obodo mara mma. Ya akụkọ ihe mere eme na-amalite dị ka narị afọ nke XNUMX mgbe emepụtara parish nke Detwang, nke taa bụ agbata obi obodo ahụ. Obodo ahụ etolitere n’ogo nke Imperial City na narị afọ nke iri na abụọ ma kemgbe ahụ ọ malitere ịba ọgaranya ma too. Ugbua na narị afọ nke iri na isii ọ ga-ata ahụhụ na Agha Afọ Iri Atọ ma emesịa na-arịa ọrịa. N’Agha Worldwa nke Abụọ, ọ pụtara ịbụ otu n’ime obodo kacha mezuo echiche ndị Nazi, nke bụ isi ojii n’akụkọ ihe mere eme ya. E mebiri ya na esemokwu ahụ, mana n'ihi uru ọ bara na akụkọ ntolite, ọ dịghị ngwa agha ejipụtara iji tọhapụ ya site n'aka ndị otu jikọrọ aka, nke chebere ọtụtụ akụkụ obodo ahụ. N'ihi ya, ọ ka dị mma, ebe ọ bụ na esemokwu ahụ gasịrị, e weghachiri ya ngwa ngwa.
Nwere ike ịmalite njem obodo na Gallow-Gate, mgbidi obodo ochie. Site na ebe a anyị nwere ike ịhụ mgbidi oge ochie nke narị afọ nke XNUMX, site na nke ị nwere ike ịga obere ije na Röder Tower. Enwere ike ịrị ụlọ elu nchebe ochie a maka obere ego. Anyị na-atụ aro mgbe niile ime ihe niile enwere ike mgbe anyị na-aga ebe ndị ahụ n'ihi na anyị amaghị ma anyị ga-enwe ike ịlaghachi ma ọ bụ na anyị ga-atụ uche ihe na-atọ ụtọ. Mgbe ahụ i nwere ike ịga n’ihu n’akụkụ mgbidi ahụ n’ebe ndịda ma ọ bụ gaa na etiti obodo ahụ mere ihe akụkọ. Ọ bụrụ na anyị gafere n'okporo ụzọ ahụ na ndịda site na mgbidi anyị ga-eru bastion nchebe nke a maara dị ka Spital Bastion nke malitere na narị afọ nke XNUMX. Si ebe a ị nwere ike inwe ọmarịcha echiche nke obodo.
Nke a bụ otu esi mara akụkụ a, nke doro anya na ọ bụ foto kacha ese foto na obodo ahụ dum. Ọ bụ ogige dị n'okporo ámá ndị nwere amara pụrụ iche ma jiri ya mee ihe maka mkpuchi nke njem gaa Germany n'ihi mmetụ ụlọ ya nwere. Si ebe a ị nwere ike ịhụ Sieber Tower na Kobolzeller Tower. Ọ bụ otu n'ime ebe foto kacha ese foto na Germany niile, yabụ na ọ bara uru ịkwụsị ịtụgharị uche. N'aka nke ọzọ, ọ dị mma ịga n'abalị, mgbe ebe a na-adọrọ mmasị pụrụ iche.
Near Plönlein anyị na-achọta isi akụkụ nke obodo ahụ, Marktplatz. Nke a bụ otu n'ime ebe ochie na ebe kachasị mma n'obodo, nwere ụlọ na-adọrọ mmasị. Halllọ nzukọ obodo ma ọ bụ Rathaus nwere facade mara mma nke Renaissance na ụfọdụ akụkụ Gothic dịka ụlọ elu. Oflọ ọzọ kachasị ihe nnọchianya na square bụ Ratsherrntrinkstube nwere ụlọ elekere nke taa ghọrọ ọfịs ndị njem nleta, ebe anyị nwere ike ịkwụsị iji chọpụta ihe.
Museumlọ ihe nkiri na-ata ahụhụ
N’ezie n’obodo ahụ enwere otu n’ime ebe ngosi ihe mgbe ochie na - achọ ịmata nke anyị nwere ike ịhụ n’agbanyeghi na ọ dabara adaba maka ndị anaghị amacha. Ọ bụ Museum of Torture or Crime Museum na chikọta ochie ịta ahụhụ na ụdị ngwa ọrụ niile na ọbụnadị akwụkwọ iji mara nka a emere n'oge emepechabeghị anya n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na Europe na isiokwu a. N’obodo ahụ, enwere ebe ngosi ihe mgbe ochie ọzọ, ihe ngosi nka nke ụmụ bebi na ihe egwuregwu, nke nwere ike ịmasị ụmụaka na ndị okenye.
Chọọchị San Jacobo
N'ime ụlọ ahịa, anyị na-ahụkwa ụlọ ụka kacha ochie n'obodo ahụ, nke San Jacobo ma ọ bụ Santiago. Ọ bụ wuru n'etiti XNUMX na XNUMX nke narị afọ na ụlọ elu Gothic abụọ ahụ dị n'èzí pụtara ìhè. O nwere ike ịbụ ihe dị mma ịbanye na ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga ụlọ okpukpe, n'ihi na anyị ga-ahụkwa ebe ịchụàjà nke ọbara dị nsọ, nke bụ ọrụ dị mkpa nke na-adọrọ mmasị ndị ọbịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-eme na Rothenburg
Bath, a nnọọ British ebe